အမျိုးသေးတာ တွေးပူမအေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမျိုးသေးတာ တွေးပူမအေးပါ
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Apr 30, 2017 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 11 comments
ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသား၁၀ယောက်မှာ ၉ယောက်ခန့်ရဲံ့ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားဟာ အလွန်မှ အားမရစရာလေးတွေ တွေ့တွေ့နေရပါတယ်။နိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ အားကစားသမားတွေတောင်မှ တောင့်တောင့်တင်းတင်းသန်သန်မာမာ အရွယ်အစားမရှိတာမို့ သာမာန်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ ပြောဖွယ်ရာမရှိပါ။
ဒါပေမယ့် ယခုနောက်ပိုင်းခေတ်မြန်မာလူငယ်တွေဟာ စာသင်ကျောင်းမှာတည်းကိုက သေးသေးညှက်ညှက်အရွယ်အစားတွေကို ပုံမှန်အရွယ်အစားလို့ခံယူထားကြပြီး အတန်းထဲမှာ အရပ်အမောင်းကောင်းတဲ့လူပါလာပြီဆို လောရှည် လောရှည်နဲ့စနောက်ကြတဲ့အစဉ်အလာတောင် ဖြစ်နေကြပါပြီ။
မိန်းကလေးတွေထဲမှာဆိုလည်း ကျွန်မတို့လို သာမာန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိသင့်တဲ့အရပ်အမောင်းရှိတဲ့လူတောင် အတန်းထဲမှာ အရပ်ရှည်ထွက်နေမှာစိုးလို့ ဒူးကွေးထားရလောက်အောင် ရှက်စရာတစ်ခုဟု ခံယူလာခဲ့မိတာအမှန်ပါ။
လူငယ်လေးတွေစိတ်မှာ ဘာလို့ရှက်စရာတစ်ခုလိုလှောင်ပြောင်ကြလဲ၊ဘာလို့ ရှက်စရာတစ်ခုဟုခံယူကြလဲဆိုရင် မြန်မာလူငယ်တွေအများစုဟာ သေးသည်ထက်သေးငယ်လာကြတဲ့အတွက် အများဖြစ်နေတာကိုပဲပုံမှန်လို့လက်ခံကုန်ကြလို့ပါပဲ။
အရင်းကိုစစ်ရရင် အစိုးရမကောင်းခဲ့လို့၊တိုင်းပြည်ဆင်းရဲမွဲတေလို့ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ပဲပြန်ရောက်ရမှာပါ။
မှားယွင်းမှုပေါင်းများစွာနဲ့ပညာရေးယန္တရားကြီးဟာ လူငယ်တွေကို တုံးအ ညံ့ဖျင်းစေရုံမက ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုကိုပါဖိနှိပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကာယအချိန်တွေမှာ ခြေမြှောက်၊လက်မြှောက်၊အမှိုက်ကောက်လောက်သာ အဖြစ်သဘောလုပ်ဆောင်စေခြင်း တို့ကလည်း
တစ်ခြား တစ်ခြားသော နိုင်ငံတွေကလူငယ်တွေနဲ့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုကွာဟကုန်စေခြင်းရဲ့အခြေခံတွေပါပဲ။
ကျောင်းတွင်းပညာရေးအပြင် ကျူရှင်တွေအင်အားကောင်းမှုကြောင့် ကလေးငယ်တွေဟာ ကျောင်းပြီး ကျူရှင် ၊ကျူရှင်ကနေ ကျောင်းတန်းသွားဓလေ့ဆိုးကြီးရဲ့နှိပ်စက်မှုဒဏ်ကို ယနေ့ကာလထိခံနေရဆဲပါ။
ကလေးတွေရဲ့ဆန္ဒကိုရှေ့တန်းမတင်တဲ့ မိဘတွေရဲ့မြန်မာပြည်ပညာရေးအပေါ်စိုးရိမ်သံသယကြီးမှုတွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်လာရရှာသူလေးတွေမှာ ကာယဥာဏဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှုကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေပျောက်ဆုံးကုန်တာ ယခုတိုင်ပါ။
ထို့အပြင် အချိန်ပိုလေးရှိလို့ကစားခုန်စားလိုစိတ်ရှိခဲ့ရင်တောင် နေထိုင်ရာဝန်းကျင်တွေမှာ ကျယ်ဝန်းလုံခြုံတဲ့နေရာရယ်လို့မရှိကြတာကြောင့် မိဘတွေအနေနဲ့ ဘယ်နေရာမှာမှ စိတ်ချလက်ချ လွှတ်မထားဝံ့ကြပါဘူး။
တောသူတောင်သားကလေးငယ်တွေအနေနဲ့မှာတော့ ပြင်ပကျူရှင်ချိန်နည်းပါးခြင်း၊ကစားခုန်စားရန်နေရာကျယ်ပြန့်ခြင်းတို့ရှိကြပါတယ်။သို့သော် ခုန်ပေါက်ကစားတာနဲ့ညီမျှတဲ့ အစာအဟာရပြည့်မှီဖို့ ဖြည့်တင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။
မြန်မာလူမျိုးဟာ တစ်နေ့ ထမင်း၃ကြိမ်စားရရင် ပြည့်စုံပြီလို့မှတ်ယူထားတဲ့အတိုင်း ကျေးလက်တောရွာတွေက ကလေးငယ်တွေဟာ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ထမင်းကလွဲလို့ မုန့်ပဲသွားရေစာနဲ့ အပို အစာအာဟာရ မှီဝဲနိုင်သူရှားပါးကြပါတယ်။
ဆင်းရဲ ရှားပါးလွန်းတဲ့အရပ်တွေ၊မိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အရပ်တွေ၊ပင်လယ်ကမ်းနားတံငါရွာတွေမှာဆို ထမင်းတောင်နပ်မမှန်ကြသူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။ကလေးသူငယ်တွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖို့ထက် မနိုင်ဝန်တွေကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင်ကုန်းချိပုညှက်ကုန်တာတွေလည်း အများအပြားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ယနေ့ကာလ နိုင်ငံအတွင်းမှာ ကူးစက်မြန်တဲ့နာတာရှည် ရောဂါဆိုးတွေလွယ်လွယ်ကူကူ ကြီးကိုလျင်မြန်စွာကူးစက်နေကြတာပါပဲ။
အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကွပ်ကဲမှုဦးစီးဌာနရဲ့ တင်းကြပ်သေချာစွာစစ်ဆေးအရေးယူမှုလက်တံအောက်ကလွတ်နေတဲ့ စည်းကမ်းမဲ့လောဘသားကောင်တွေဟာ စစ်ဆေးအရေးယူခဲ့ရသူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် အဆပေါင်း သိန်းသောင်းလောက် ကွာခြားနေပါတယ်။အစားအသောက်၊ဆေးဝါးနဲ့အခြားအခြားသော လူသုံးကုန်တွေ၊ဓာတုပစ္စည်းတွေမှတဆင့် ရောဂါဘယတွေထူပြောလာခြင်း။
ဆိုးရွားစွာပြန့်ပွားနေမှန်းသိသည့် ရောဂါဘယတွေအပေါ် အခမဲံ ဆေးကုသတိုက်ကျွေး ထိုးနှံမှုတွေ မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သေးခြင်းတွေကြောင့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်လက္ခဏာ၊ရုပ်လက္ခဏာတွေဟာ အနုတ်ဘက်သို့ ကျပြီးရင်းကျဆင်းနေခဲ့ပါပြီ။
အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်သူတွေအတွက် အဓိကထိတ်လန့်ရမယ့်အကြောင်းတရားတွေမို့ မယောင်ရာဆီလူး ပူပမ်ကြောင့်ကြမှုတွေ၊ရန်ဒေါသမီးတွေကိုအသာထားလို့ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အမျိုးတကယ် သေးကွေး၊ပုညှက်၊အနာထူ၊အသက်တို၊ဘ၀ပျောက်သွားနိုင်တဲ့အရေးကို ဆင်ခြင်သုံးသပ် တွေးပူတတ်ကြပါစေလို့ သတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်လို့ရမယ့် နေရာတွေ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရှိနေဖို့လည်း လိုသေးတယ်။
ကျနော်ဆို ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်အောင် လေ့ကျင့်ချင်ပေမယ့်GYMထဲ မဝင်ရဲဘူး။ ချမ်းသာတဲ့သူတွေမှ တတ်နိုင်တဲ့ ဈေးတွေ ဖြစ်နေတာ။
Gymသွားပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအစားကျအောင်ကစားဖို့ထက် စာသင်ကျောင်းတွေမှာတညိးက ကျန်းမာကြံခိုင်အောင်အလေ့အကျင့်ဖြစ်အောင်မြေတောင်မြှောက်စေချင်တာ။အရပ်အမောင်းထွက်ဖို့ကျတော့ ငယ်စဉ်တည်းက လေ့ကျင့်ပေးမှလေ။ကြီးလာမှ ကိုယ်ခန္ဓာတော့ကျစ်လစ်သန်မာအောင်လေ့ကျင့်ယူပါရဲ့။အရပ်ကပုတုတုလေးဆိုလည်း အအဆင်မပြေဘူး။ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ပုပုညှက်ညှက်ချည့်မြင်နေရတာများလာပြီ။အစ်မတို့ငယ်ငယ်ကအတန်းထဲမှာဆိုယောက်ျားလေးတွေအရပ်မြင့်ကြတယ်။တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် သေးကွေးကုန်တာ ခုခေတ် ဆယ်တန်းကျောင်းသားမဆိုနဲ့ အလုပ်ခွင်ဝင်လာတဲ့လူတွေတောင် ကလေးသာသာလေးတွေ ???
လူ့ခန္တာအချိုးသေးတယ်ဆိုတာ.. မွေးစကနေ.. အသက်၁၀နှစ်ထဲ.. အဟာရပြည့်အစားတွေမစားလို့ဗျ..။
သူများတွေက ကျောင်းမှာ သေချာ တွက်ချက်ပြီး ကျွေးတယ်။
ဂျုံ အသား နွားနို့ ကြက်ဥ ဘလာ ဘလာ ဘလာ…
(အမဲသား မစားတာလဲ တစ်ကြောင်း)
ကျောင်း ဆိုတာ စာသင်ဖို့ ဆိုတာလောက်ပဲ သုံးနေကြတာလဲ မကောင်း။
အားကစား ကိုယ်ကာယ ကြံ့ခိုင်မှု တွေ အတွက် က ဘယ်နားမှာမှ လုပ်လို့ မရ။
(ဂျင်မ် မသွားဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အိမ်မှာ လုပ်ရင် ရတယ် ဆိုလဲ စနစ်တကျ ရှိမှာ မဟုတ်၊ လုပ်လဲ တစ်ရာ မှာ ဆယ်ယောက် အလွန်ဆုံးပေါ့)
ကျနော် ဆို အဖေဘက် လိုက်သွားတော့ အရပ် က ခွေးပစ်တဲ့ တုတ်သာသာ ဖြစ်နေရော။
အမေ့ ဘက်က အမျိုးတွေဆို ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း တွေ။
အလွယ်ဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ဆရာသော်တာဆွေ ကြံစည်သလိုပဲ အရပ်မြင့်ပြီး ကိတ်တဲ့ မိန်းမ ရှာယူရတော့မယ်
ကိုယ့် မျိုးဆက်လေးတွေ ထွားကျိုင်းဖို့ အရေး ဟေး ဟေး ဟေး
ရဲတိုက်လေးကို ထားခဲ့ပြီး ကွီးစိုင်း ကိုဖဲ ရွေးချယ်မယ် စိတ်ကူးတယ်ကွယ်။
အာ့ကြောင့်မို့ မွေးလာတဲ့ကလေးကျရင် အာဟာရသေချာကျွေးမယ်.. ကျန်းမာသန်စွမ်းအောင် လေ့ကျင့်ပေးမယ် စဉ်းစားထားတယ်..
အမျိုးသေးတာဆိုပေမယ့် အမျိုးထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲသေးနေတာတော့ ဒီဘ၀အတွက် မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ခုမနောသမီးကျတော့ မနောနဲ့မတူဘဲ အရပ်ရှည်တယ်။ အရွယ်ရောက်လာရင် ရေကူးတို့ အားကဟစားတို့ကို အားပေးဖို့လည်း စဉ်းစားထားတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းပန်းခြံတွေမှာလည်း ကျန်းမာရေး လက်ကျင့်ခန်းစက်တွေတပ်ထားတာတွေ့ရှိရတဲ့အတွက် အားလုံးအတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေလာပြီထင်တာပါပဲ။ အချိန်လေး နည်းနည်းပေးကြဖို့ပဲ ရှိတာပါ။ မနောကတော့ ကိုယ်ပုသေးသလောက် သမီးအတွက် အစာအာဟာရလည်း အကုန်ကျွေးနေတယ်။
ကလေးမွေးစကနေ.. အသက် ၆နှစ်အထိ နွားနို့(အစစ်)၊ကြက်ဥတိုက်တာနဲ့တင် ကိစ္စပြီးပါတယ်..။
၁) လူသားတွေအတွက်.. တိရိစ္ဆာန်မွေးမြူ.. အသွေးအသားယူစားတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့အလုပ်ကို.. သမ္မာအာဇီမဟုတ် ထလုပ်တဲ့ ဘာသာရေးကြောင့်ရယ်..။
၂) တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယသား ဟိန္ဒူတွေ မြန်မာပြည်ထဲ အသားကုန်အခြေချလာတဲ့ခေတ် ၁၈ရာစုအကုန်ပိုင်းက ဟိန္ဒူမျိုးနွယ်တချို့ရဲ့… နွားကိုမြင့်မြတ်တဲ့သတ္တ၀ါအဖြစ်သတ်မှတ်မှုအခံကြောင့်.. မြန်မာတွေပါ.. နွားအသားပါမစားဖြစ်ကုန်..။ သက်သတ်လွတ်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ မူလတရားလိုလိုထင်ကုန်..။
စာရင်းချုပ်တော့… နွားနို့အစစ်ရှားတဲ့မြန်မာပြည်မယ်.. နွား၊ကြက်လည်း စီးပွားဖြစ်မမွေး…။ ပုဇွန်၊ ငါးလည်း စီးပွာဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မမွေး… စားသူလည်းနည်း..။
ခန္တာကိုယ်ညှက်တာက ပြဿနာသိပ်မရှိသေး..။ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပါညှက်ကုန်ကြသမို့… အခုလိုမြန်မာပြည်ကြီးကို မြင်နေရတာလို့.. end justifies the means
အသက်၆နှစ်မှာ.. ဦးနှောက်က.. ဖွံဖြိုးမှုအားလုံးရဲ့ ၉၅% ရောက်ပြီ…။
ကျော်သွားပြီးမှ.. “ဘွာတေး”လုပ်… ပြန်ဖြည့်လို့မရတော့…။
ကလေးတွေကို.. အသက် ၆နှစ်မရောက်ခင်.. နွားနို့၊ ကြက်ဥ၊ အသား အသက်၆နှစ်မပြည့်ခင် အသားကုန်ကျွေးကြ..။
Throughout the lifetime of the human brain it continues to undergo changes.
Let’s review each of the five stages of human brain growth:
တအားကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါနော်။ အမဖြင့် ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်ထဲ မချမ်းသာ။ လူကို ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းကို မသိဘူး။